English – Page2– VOM News
Interview with Monywa Aung Shin
Interview with Monywa Aung Shin There will be gives and takes. Monywa U Aung Shin, the secretary of the National League for Democracy party’s information committee said there will be gives and takes with the relationship with China, as the country is due to welcome Chinese President Xi Jinping. President Xi Jinping’s visit is to strengthen the ties between Myanmar…
The Gambia v Myanmar ဂမ်ဘီယာ နှင့် မြန်မာ အမှု ၂၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ တင်ထားဆွေ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှာ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှု နဲ့စပ်လျဉ်းပြီး လိုက်နာရမယ့် ဥပဒေ ကန့်သတ်ချက်တွေရှိပါတယ်။ ဒီဥပဒေကန့်သတ်ချက်တွေကဘာတွေလဲ၊ ဒီဥပဒေကန့်သတ်ချက်တွေကို ဂမ်ဘီယာက ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့ဘာတွေလိုသလဲ၊ The European Journal of International Law ဘလော့ခ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာသုတေသီ Thomas Van Poecke, Marta Hermez နဲ့ Jonas Vernimmen တို့ရဲ့ဆောင်းပါးကို မှီငြမ်းပြီးဆွေးနွေး တင်ပြပါမယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး International Court of Justice, ICJ ဆိုတာဘာလဲ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးက ကုလသမဂ္ဂရဲ့တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်နဲ့အညီ၁၉၄၅ ဇွန်လမှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၁၉၄၆ခုနှစ် မှာလုပ်ငန်းစတင်ပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးကနယ်သလန်နိုင်ငံ သဟိဂ်မြို့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနန်းတော် Peace…
Article, သုံးသပ်ချက်, ဆောင်းပါး
6 mignitude earthquake rocked central Myanmar
Shwe Bo – September-2019 A6magnitude earthquake central Myanmar on August 31 late evening that many religious buildings and schools were destroyed. The earthquake, centering 14 miles North West of Shwe Bo District Sagaing division, impacts mostly on Khin Oo township. About 36 Pagodas, 11 monasteries,amosque and 8 schools were affected with crack walls and the fencings…
English, News, သတင်း
Prison riots under control, Shwe Bo prison has causalities
Mandalay-May-9-2019 Prison riot in Shwe Bo, Sagaing division, which claims4lives and injured inmates was under control after the prison authorities and police used force to disperse the protesting inmates. The prison riot in Shwe Bo was begun on May 8, where the inmates protest for amnesty. The inmates confront with the prison authorities that the…
English, Newsvoiceofmyanmar Myanmar prisons shewbo prison riots